सरकार र डा. केसी पक्षबीच अवरूद्ध वार्ता पुनः सुचारू
काठमाडौँ । बुधबार अवरुद्ध भएको सरकार र अनशनरत डा. गोविन्द केसी पक्षका वार्ताकारहरुबीच पुनः वार्ता सुरू भएको छ ।
सरकारी पक्षले छलकपट गरेको आरोप लगाउँदै केसी पक्षले बुधबार वार्ता छाडेका थिए । उनीहरूले विज्ञप्ती जारी गरेर वार्ता छाडेको बताए पनि सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बिहीबार वार्ता पुनः सुरु भएको हो ।
डा. केसीको अनशन २८ औं दिनमा निरन्तर चलिरहेको छ ।